Lelee anya, Sochie ma Meziwanye Mobile Mobile App | Martech Zone
Ọ na-eju m anya mgbe niile ọtụtụ nyiwe na ngwa ndị ọzọ enwere nke m anụtụbeghị n'agbanyeghị na anyị na-ege ntị maka ihe kachasị ọhụrụ. Mgbe omumu banyere Bunndle, M na-akọrọ ikpo okwu na anyị haziri nzukọ na Mindjet. Ha nwere ngwa 3 dị egwu - Mindjet, Ọrụ Mindjet na Nzube - akwụkwọ ha dị egwu.
CMO nke Mindjet, Jascha Kaykas-Wolff, mee ka m mara maka SensorTower, a ikpo okwu iji nyere gị aka soro ma bulie ngwa mkpanaka gị.
Sensor Tower nwere ihe niile ịchọrọ iji nyochaa ọnụnọ ngwa gị na ụlọ ahịa ngwa, bulie mkpụrụokwu maka ngwa gị, ma nyere gị aka ịnye ọkwa ndị asọmpi.
Ihe mmetụta Sensor Tower gụnyere:
Isiokwu Dabere App ọkwa Ndepụta - Sochie ogo na arụmọrụ gị maka Keywords niile metụtara ngwa gị.
Data ndekọ data - zuru ezu na ezi akụkọ ihe mere eme data na kwa isiokwu ndabere. Nwere ike ịhụ ma soro mmezi na mgbanwe gị ka ị na-eme mgbanwe na isiokwu ngwa gị.
Udi ingnye Ndepụta - Nchịkọta ụdị dị iche iche bụ ihe ngosipụta nke ọganiihu nke ngwa, yana inwe data zuru ezu gbasara ihe mgbanwe gị na ahịa ma ọ bụ nkwalite dị iche iche mere na ọkwa nke ngwa gị bụ uru asọmpi siri ike. soro gị ngwa si arụmọrụ gafee niile edemede ị kwubara nke ọma.
Na-ebuli Keywords - ngwa ọrụ nyochara isiokwu gị, igbochi mmejọ nkịtị na oke ọnụ nke isiokwu adịghị mma nwere ike ịzọpụta gị n'iyi ohere bara uru ma nwee ike ị nweta ọtụtụ okporo ụzọ.
Nọgide n’elu ndị asọmpi - ịmara ndị asọmpi gị na ihe ha ga - abụ ọrụ siri ike ijikwa ọbụlagodi nnukwu otu. Chọpụta ndị asọmpi gị na ihe ha na-eme ka ị ghara ichegbu onwe gị gbasara ijide gị na-amaghị.
Anyị Marketing n'ihi na Martech Zone họọrọ # 1 maka Blog Ahịa ngwa na # 23 maka okwu ahụ marketing na ngwa ngwa maka ngwa Ahịa ma na-aga n'ihu na-ebudata mgbe niile kwa ụbọchị!
Sensor Tower na-akpaghị aka na-ewepụta ndị asọmpi gị kachasị mkpa maka gị. Na data a ị nwere ike soro arụmọrụ nke ngwa gị n'etiti isiokwu dị iche iche ma jiri ngwa gị tụnyere ndị asọmpi gị, ha niile n'otu mfe iji interface. A na-eme nke a na isiokwu site na isi okwu, yabụ ị nwere ike ịnweta usoro ziri ezi na nke zuru oke gbasara arụmọrụ nke ngwa gị.
Tags: nyocha asọmpiogo droid ngwaiphone ngwa ogoekwentị mkpanaaka Keywordsnjikarịcha ngwa mkpanakamobile ngwa ogomobile isiokwu nnyocha
Nov 14, 2013 na 8:30 PM
ọzọ dị ukwuu post Doug! Daalụ maka ịkekọrịta
Nov 14, 2013 na 8:54 PM